“Maamul-gobolleedyada xaq ayey u leeyihiin in ay kulmaan balse dastuurka ayaa xadidaya waxa ay ka hadlayaan” – Kalfadhi
“Maamul-gobolleedyada xaq ayey u leeyihiin in ay kulmaan balse dastuurka ayaa xadidaya waxa ay ka hadlayaan”
Xildhibaan Cabdi Cali oo kamid ah xildhibannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay isaga oo xiganaya dastuurka in maamul-gobolleedyada ay xaq u leeyihiin in ay ka shiraan arrimaha ku saleysan danahooda.
Mudanaha, ayaa sidoo kale caddeeyay in qodobka 50-aad uu xadidayo waxa ay ka hadlayaan, “Kama hadli karaan heerarka kala duwan ee dowladda, heerka ay joogaan waxii quseeya ayey ka hadli karaan, laakiin shuruuc aan halkan kasoo saarnay in ay bur-buriyaan xaq uma lahan”, ayuu yiri.
“Anniga waan soo dhoweynayaa shirka Dhuusamareeb, maxaa yeelay qodob dastuuri ah ayaa u oggolaanaya in dowlad-gobolleedyada ay kulmaan oo danahooda ka hadlaan, laakiin qodobka 50-aad waxaa uu xadidayaa waxa ay ka hadlayaan, kama hadli karaan heerarka kala duwan ee dowladda, heerka ay joogaan waxii quseeya ayey ka hadli karaan, laakiin shuruuc aan halkan kasoo saarnay in ay bur-buriyaan xaq uma lahan”.
Shirkii madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya oo todobaadkii hore wajigiisa koowaad lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa kasoo baxay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay sidii wadatashiga loo ballaarin lahaa, madaxda dowladda federaalkana waxay ugu baaqeen inya Dhuusamareeb yimadaan.
Maamul goboleedyada ayaa sheegay in maadaama dalku aanay xilligan ka dhici karin doorasho “qof iyo cod ah” loo baahan yahay in ay dhacdo doorasho taladeedu loo dhan yahay “nooc ahaanna ku dhici karta muddo xiliyeedka harsan”.